Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray natiijada doorashada Mareykanka xilli Trump uu diidan yahay | Warkii.com
Home warkii Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray natiijada doorashada Mareykanka xilli Trump uu...
Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray natiijada doorashada Mareykanka xilli Trump uu diidan yahay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo shalay ku guuleystay tartankii uu la galay Donald Trump.
Farmaajo, oo qoraal soo dhigay twitter-ka, ayaa sidoo kale u hambalyeeyey madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris.
“Soomaaliya waxay idiin rajeyneysaa inaad ku guuleysataan howlihiina. Waxaan sugeynaa wada-shaqyentiina iyo saaxiibtinimadiina dhow. Mareykanka waxa uu saaxiib iyo xulufo xooggan u yahay kobaca iyo horumarka Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Si kastaba, Donald Trump ayaa diiday inuu aqablo natiijada doorashada madaxweynaha Mareykanka.
Previous articleDF oo Axmed Madoobe ku celisay guddiga doorashada, kana hor-timid laba arrin
Next articleCaqabadaha haysta labada guddi ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaare ROOBLE
Ra’iisul Wasaraaha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa diiday cadaadis kaga yimid beesha caalamka oo ku saabsanaa inuu soo geba-gebeeyo dagaalka gobolka Tigray, waxaana ay ciidamadiisa...